PressReader - Isolezwe: 2018-05-17 - Injabulo abafundi abaminyene benikelelwa
Injabulo abafundi abaminyene benikelelwa
Isolezwe - 2018-05-17 - IZINDABA - ZANELE MTHETHWA
UPHENDUKE ikhonsathi izolo umcimbi wokunikelwa kwekilasi esikoleni samabanga aphansi KwaMakhutha, othisha nezingane bejabulela lesi sipho.
Bekusha ingoma kuphela kubafundi nothisha baseYiboni Primary ngesikhathi abakwaTransnet Port Terminals (TPT) bezovula ngokusemthethweni ikilasi abanikele ngalo. Okwenze injabulo ibe nkulu ukuthi isipho besingalindelwe. UMnuz Mduduzi Kheswa obenguthishanhloko wesikole kodwa oseqokelwe ukuba umhloli wesekhethi, uthe ubengeke aphuthe emcimbini yize engasasiphethe isikole. Uthe abakwaTransnet bafika bezonikelela abafundi ngezicathulo, bathola ukuthi kukhona abaminyene emakilasini.
“Banquma ngalelo langa ukuthi bazonikela ngekilasi. Baqale bathi bazonikela elingumahamba nendlwana babuye bathi bazolakha. Asikholwanga nokuthi kuzoshesha ngale ndlela,” kuchaza uKheswa.
Unxuse ukuthi abafundi baliphathe kahle ikilasi, wathembisa nokuthi uzolokhu evakasha ezolibheka.
USihlalo wesigungu sabazali uMnuz Bheki Buthelezi uthe sebedinga umtapo wolwazi abathemba ukuthi abakwaTransnet bazobabhekela kulesi sicelo.
OyiGeneral Manager yakwaTPT ophikweni lweProcurement uNkk Thandile Sabelo, uthe ukunikelwa kwekilasi kungaphansi kohlelo lokuthuthukisa imiphakathi. Uthe kwabathinta ukubona abafundi beminyene ekilasini ngesikhathi bezonikela ngezicathulo.
“Sinethimba elibhekela izidingo zomphakathi ukuze silekelele. Sinohlelo olubizwa ngeTransnet Volunteers Villages esaluqala esiyingini i-Ink (Inanda, Ntuzuma, KwaMashu). sadlulela nasezindaweni ezisemakhaya. Kuwo wonke amathenda esiwakhiphayo kunesigaba sephesenti elithize okumele lisebenze ukuthuthukisa umphakathi,” kuchaza uNkk Sabelo.
UNksz Brenda Magqwaka oyisikhulu esiphezulu kwaTPT, uthe ukubona izingane kuleli kilasi elisha kusho ukubona ikusasa lesizwe. Uthe ukuthuthukisa umphakathi kungezinye zezinto eziseqhulwini kubona. Uthe kuleli phesenti kuya ngokuthi inkulu kangakanani ithenda. Uveze ukuthi abanikeli ngamakilasi kuphela kodwa kuya ngokuthi umphakathi yini oyidingayo.
Abebehambele umcimbi bahlabeke umxhwele ngomculo wabafundi nothisha. Ikwaya yesikole ebilekelelwa ngothisha, igcine ishintsha amaculo ajwayelekile yawenza ahambisana nokubonga isipho sekilasi. Abanye abafundi bakhombise amakhono ngobuciko bezinkondlo nabo bebonga isipho. Ikilasi elinikeliwe lihambisana negumbi lothisha. Ikilasi linamathiselwe nangezithombe zemicimbi ekhombisa ukuvelela kwalesi sikole.
Isithombe: NQOBILE MBONAMBI/ANA
BEKUYINJABULO yodwa kuvulwa ikilasi eYiboni Primary KwaMakhutha elinikelwe ngabakwaTransnet Port Terminals. Lapha izikhulu zakwaTransnest ezithathwe nabafundi okunguZama Biyela noNkosinathi Sishi